Ezona ncwadana zintle zomdlalo weqonga
Uphengululo lwenoveli yedrama
INyanga ePheleleyo, ngu-Aki Shimazaki
Ukubhala ngothando ku-Aki Shimazaki kunengqwalasela eyodwa, ukukhanya kobukho obukhoyo obususela kubuze bentliziyo ebuhlungu ukuya kwintlakohlaza engapheliyo yokuthabatheka kwakhona. Amanzi ahamba ngokuhambelanayo kwaye avuse imvakalelo efanayo ukusuka naphi na ngokukhawuleza nje ukuba isiselo sokugqibela sikhutshwe. Phakathi...
Amandla enja, ye Thomas Savage
Imbali ye Thomas Savage owazalwa ngo-1967 ngoku esiza kuthi nobo bubi bungaqhelekanga kwezona nyikima besingazilindelanga. Ngaphambili isenokubonakala ngathi yimbali ye-United States enzulu, namhlanje iphinde yafunyanwa njengengxelo esondeleleneyo enamandla, ubuncinci kwasekuqaleni, ephonononga loo mbono wokuba yintoni ...
Ukungazinzi kobusuku, ngu-Marieke Lucas Rijneveld
Ezona zinto zimbi zenzeka ngaphandle kwexesha. Akukho xesha lilungileyo kwiindlela ezilungileyo zokuqala. Ngaphandle koku, ezona zinto zimbi zenzekileyo, kunye ne-cadence engazukuchazwa kwisizathu sabantu ngaphandle kokuzama ukuyidibanisa nolunye uhlobo lokubulawa kwabantu ngaphambi kwembuyekezo okanye ...
Imizila yokuThula, nguJohn Boyne
Isiphelo sombhali ngamnye kufanele ukuba abhale owona msebenzi wakhe ubalaseleyo kungekudala ngaphambi kokushiya inqanaba, nokuba kungokurhoxa kwihlabathi loncwadi okanye ngokufa. Crude kodwa yinyani. Kungenxa yokuba kamva sifumana iimeko ezinje ngoJohn Boyne, engakwaziyo ukubhabha ngaphezulu komntwana wakhe ...
Umama kaFrankstein, osuka Almudena Grandes
Ndihlala ndifumana i-etymology yegama elithi hysteria inomdla. Kungenxa yokuba ivela kwisibeleko ngesiGrike. Kwaye ke umanyano olula nolucekisekayo lwabasetyhini kunye nabaphambeneyo ngokwendalo lufumaneka ngokulula. I-Aberrant. Almudena Grandes kule noveli igxininiswe kwingqondo ethile yabasetyhini eyayikho ...